Shabaab oo weerarkii Shabellaha Hoose u adeegsaday xeelad cusub | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shabaab oo weerarkii Shabellaha Hoose u adeegsaday xeelad cusub
Shabaab oo weerarkii Shabellaha Hoose u adeegsaday xeelad cusub
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa ka hadlay weerarka Sabtidii ay maleeshiyada Ururka Al Shabaab ku qaadeen xeryaha Ciidanka Xoogga Dalka ku leeyihiin Degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire ee gobolkaasi.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Shabaabka ay xerada Awdheegle ku soo weerareen gaari nooca aysan rasaasta karin ah, balse la qarxiyay ka hor intii aanu soo gaarin xeradaasi.
Gudoomiyaha ayaa tani ku sheegay xaaladaha cusub ay iminka bilaabeen inay adeegsadaan maleeshiyada Ururka Al Shabaab ee dagaalka dalka ka wada.
“Awdheegle baabuur ismiidaamin oo Bullet Proof ah ayay damceen inay xeendaabka xerada ku bilaabaan, oo ku soo weeraraan, laakiin intii uusan soo gaarin ayaa la qarxiyay. Gaarigaasi Bullet Proof-ka ah waa noocyada cusub, waa xeeladaha cusub ee nimankan argagixisada ay hadda bilaabeen. Koley baabuurkaasi inay tijaabinayeen baan u qaadanay anaga.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo la hadlay BBC.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Shabaabku doonayeen inay gudaha u soo galaan xeryaha Ciidanka Xoogga Dalka, balse laga hor istaagay, dagaalkana lagu jebiyay.
Sidoo kale waxaa uu beeniyay wararka sheegaya in Shabaabku ay xoog kula wareegeen xerada Ciidanka Xoogga Dalka ee deegaanka Bariire.
“Bariire iyo Awdheegle waxay isku dayeen inay gudaha u soo galaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaa ku daray “Shabaab maynaan qabsan Bariire, laakiin dagaal baa ka dhacay. Bariire dagaal gacmaha leeskula tagay ayaa ka dhacay, ma inkireyno runtii, halkaasi khasaaro waa jiraa.”
“Nimankii Shabaab meydadkooda waxaan ka tirinay 40 illaa 50-meeyaa hadda horteeda taala Awdheegle.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo xusay inay uruurinayaan xogta khasaaraha Shabaabka lagu gaarsiiyay Bariire.
Cabdiqaadir Siidii ayaa qiray in khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira uu dagaalka ka soo gaaray Ciidanka Xoogga Dalka, inkastoo aanu wax tiro ah cayimin.
“Khasaaro dhaawac iyo dhimashaba waa soo gaaray geesiyaasha Ciidanka Xoogga Dalka, laakiin jilbahaa loo aastay, aad baana loo caabiyay. Waad taqaanaa ciidan difaac ku jira qofkii soo weerara, ninka weerarka ama qofka weerarka ah ayuu khasaaraha u badnaanayaa, haddana markuu jabana waaba uga sii daran tahay, wixii jebiyay waa awood ka weyn.” Ayuu yiri Siidii.
Siidii ayaa war aan sal iyo raad toona lahayn ku tilmaamay sheegashada Shabaabka ee ah inay dagaalka ku qabsadeen lix gaari oo isugu jira afar baabuurta dagaalka, ambulance iyo gaari booyad ah.
“War sal iyo raad toona leh maaha, waxay sheeganayaan xaqiiqada wax ka fog weeye.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee aagga Degmada Awdheegle ayaa gelinkii dambe ee shalay degmadaasi ku soo bandhigay meydad fara-badan oo tiradooda ay ku sheegeen 74 nin oo Shabaabka laga dilay.
Shabaabku waxay dhankooda sheegteen inay dagaalka ku dileen 47 askari, sidoo kalena ay ku furteen saanad militari iyo lix gaari oo isugu jira afar baabuurta dagaalka, ambulance iyo gaari booyad ah.
Waa dagaalkii ugu dhiig daadashada badnaa ee sanadkan labada dhinac ku dhex mara Gobolka Shabellaha Hoose.
Previous articleTaliyaha Xoogga Dalka oo beeniyay in kolonyo uu watay ay jireen dad rayid ah
Next articleWasiir Xaaji oo booqday askartii ku dhaawacantay weerarkii Sh/hoose